Hira anaty fihirana : 40 taona namoronana Razafintseheno Myriam (Zazah) | NewsMada
Hira anaty fihirana : 40 taona namoronana Razafintseheno Myriam (Zazah)
Mpamorona ny ampahan-kira maromaro ao amin’ny fihirana FFPM sy ny fihirana fanampiny Razafintseheno Myriam na i Zazah. Mankalaza ny faha-40 taona namoronany hira fiderana an’Andriamanitra izy ankehitriny.
Anisan’ny hira malaza ny fanevan’ny faha-150 taona nandefonana an-dRasalama martiora “Ry Andriamanitra Nahary”. Izy no namorona ny feon’io hira io tamin’ny taona 1987.
Namorona ny hira fanevan’ny faha-20 taon’ny Dorkasy foibe “Ry mpanompo mahatoky” ihany koa ny tenany.
Ankoatra izay ny hiran’ny faha-10 taonan’ny SPAA 10 “Mandehana”, ny hira fanampiny faha-18 “Afafazo”, ny hira fanampiny salamo 13 “Endre, tsara sady mahafinaritra”.
Anisan’ireo komity nanavao ny Tiona FFPM farany teo i zazah. Komitin’ny fihirana salamo (boky I) koa ny tenany.
Nahafantarana an’i Zazah ny antokom-pihira Orima sy Tomima ao amin’ny FJKM Ambatolampy Antehiroka Fitiavana. Namoronany hira betsaka io antokom-pihira manana ny lazany io. Ao rahateo i Zazah sy ny ankohonany no manao ny fanompoana an’Andriamanitra.
Zanaka mpitandrina i Zazah ary efa tia mihira fahakeliny. Mandeha ho azy ny famoronan-kira aminy fa tsy mifidy fotoana. Matetika, miara-tonga ny feony sy ny tonony. Raisiny amin’ny finday avy hatrany izay aingam-panahy tonga na raisina an-tsoratra mba tsy ho hadino.
Anisan’ny tena fahafinaretany ny fahafaham-pon’ireo olona tamin’ny hira noforoniny. Malahelo kosa izy rehefa tsy nahafa-po ilay olona izany hira nataony izany.
“Ny lanitra sy tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona” (Mat 24: 35). Lohahevitra nosafidin’i Zazah io amin’izao fanamarihany ny faha-40 taona namoronany hira izao. Hisy ny fanompoam-pivavahana hitondrana am-bavaka ny asa famoronan-kira amin’ny alahady 22 oktobra izao, amin’ny 2 ora sy sasany, ao amin’ny FJKM Ambatolampy Antehiroka Fitiavana. Hitohy ny alahady 29 oktobra ny fankalazana amin’ny alalan’ny antsan-kira anehoan’ny antoko mpihira sy mpanakanto ny talentan’i Zazah.
Anisan’ny hanotrona amin’izany ny Taninketsa Ezraita, ny Valiha Tory Folo, ny Feokanto, Orima sy Tomima, ny Feo Dimy, Sarah (Album Music), ny SVM, ny Riantsa, Rakotondramasy ahitana ny Dr Pauline sy Dr Lydia…. Samy haneho ny fahaizany amin’ny fihirana ny hira noforonin’i Zazah avokoa izy ireo
Ny alahady 3 desambra, hisy ny fiarahana mifaly eny Anosiala iarahana amin’ireo mpianakavin’ny finoana rehetra. Ny alahady 17 desambra kosa ny fotoam-pamaranana ka hisy ny fifaninanan-kira izay hizarana loka ho an’ireo mendrika.